Isixhobo sezixhobo | Abavelisi be China Izixhobo, Abaxhasi
Inkqubo ye- Utyekelo lokuSila Isahlukanisi esingamanzi esiqinileyo iphatha ikakhulu inkunkuma enesiqulatho samanzi esingaphezulu kwama-90%, luhlobo olutsha lwezixhobo ezikumgangatho ophezulu ezisetyenziselwa ukucoca umgquba onjengehagu, inkomo, inkukhu, iigusha kunye nazo zonke iintlobo zemfuyo enkulu naphakathi. Ingasetyenziselwa ukomisa amanzi isixa esikhulu somxholo wamanzi, njengentsalela yeembotyi zembotyi, kunye nomxholo wamanzi omkhulu kumkhombe wewayini.
Inkqubo ye- Ukulayisha kunye noMatshini wokuTyisa isetyenziswa njenge-hopper eluhlaza ekrwada ngexesha lokulungiswa kwezinto kwaye ilungele izixhobo zokulayisha iilori ze-forklift. Ukukhutshwa okufanayo kunye nokuqhubekayo kungagcini nje ukugcina iindleko zabasebenzi, kodwa kunye nokuphucula ukusebenza komsebenzi.
Inkqubo ye- Multiple Hoppers SIngle Weigh Static Organic & Compound Fertilizer Ukubetha uMakine ilungele ngokukodwa ukuxuba, ukubetha kunye nokondla iintlobo ezi-3-8 zezixhobo. Inkqubo ilawulwa ngokuzenzekelayo sisikali sekhompyuter. Ivalve yomoya isetyenziselwa ukulawula ukubonelelwa kwemathiriyeli emgqomeni omkhulu. Izinto zixutywe emgqomeni wokuxuba kwaye zithunyelwe ngokuzenzekelayo ngumhambisi webhanti.
Inkqubo ye- ID nkqo Ukuxuba YondlaUmr Umatshini isetyenziselwa ukondla ngokulinganayo izinto ezingaphaya kwezixhobo ezibini kwinkqubo yemveliso yesichumiso. Inempawu zesakhiwo esihambelanayo, ukondla ngokufanayo kunye nembonakalo entle. Kukho amazibuko angaphezu kwamabini okukhutshwa emazantsi ediski, okwenza ukothula kube lula.
Iscrew extrusion Isahluli esingamanzi esiqinileyo
Inkqubo ye- Iscrew extrusion Isahluli esingamanzi esiqinileyo isetyenziswa ngokubanzi ukuhambisa amanzi kwizinto zenkunkuma, ezinje ngomgquba wezilwanyana, intsalela yokutya, udaka, intsalela yebiogas ulwelo njl njl. yokuxhela izityalo kunye nezinye yoxinaniso eliphezulu yogutyulo ngokwahlukana.
Lo matshini awunakusombulula kuphela iingxaki zokungcoliswa komgquba kokusingqongileyo, kodwa unokuvelisa inzuzo ephezulu yezoqoqosho.
Umatshini wokuchumisa ojikelezayo isetyenziselwa ekubumbeni inkqubo ezahlukeneyo isichumiso eziphilayo kunye bio-organic emva kokuba granulating. Inokutshatiswa ngokukhululekileyo kunye nesichumisi esitsha sesichumisi, ifreyim yokufa ecinezelweyo kunye neeringi zokufa. Lo matshini wokubumba unokukhethwa kwiidiski ezimbini okanye ezintathu zenqanaba. Emva kokuba igranules zicolile, imveliso egqityiweyo egudileyo kunye negqityiweyo iyakhutshwa kwimveliso.
Inkqubo ye- Zenzekelayo Isixhobo seBatching Equipment isebenzisa ngokubanzi isikali se-elektroniki njengesixhobo somlinganiso. Injini ephambili ifakwe isixhobo se-PID esilungelelanisiweyo kunye nomsebenzi wealam. I-hopper nganye ilawulwa ngokuzenzekelayo ngokwahlukeneyo.
Umatshini wokuPakisha oPhindayo oBini Ifakwa kupakisho oluzenzekelayo oluninzi xa kuveliswa isichumiso. Inkqubo yokulinganisa ezimeleyo ngokuchaneka okunobunzima obuphezulu kunye nesantya esikhawulezayo ngokusebenzisa inzwa yokulinganisa iToledo, yonke inkqubo yokulinganisa ilawulwa ngokuzenzekelayo yikhompyuter.
Inkqubo ye- Irabha Belt swa Machine inokusetyenziselwa ukuhambisa zombini izinto ezikhulu kunye neemveliso ezigqityiweyo. Inokusebenza kunye neenkqubo ezahlukeneyo zemveliso zeshishini, kwaye yenze umgca wokuvelisa onesingqi.
Inkqubo ye- Ephathekayo Mobile Belt Conveyor ilula kwaye iyaphatheka, ukushukumiseka okusebenzayo kulayisho oluninzi, ukupakisha kwezothutho kunye nezinye izihlandlo, isuti kwiimeko ezahlukeneyo, kunye nokugcinwa ngokulula.